January 2014 - ♥ ♥ MY GREEN LIFE ♥ ♥
My lovely cheese ~ ♥♥
Phyu Lwin January 29, 20142Comments
လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ နှစ်လောက်အထိ ဖတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့စာတွေက စိတ်ခွန်အားဖြည့်စာတွေက ရသစာတွေထက် ပိုများနေခဲ့တယ် ....။ စာအုပ်တွေအများကြီးကြားထဲ မှတ်မှတ်ရရရှိနေခဲ့တာက Spencer Johnson ရေးတဲ့ Who moved my cheese? ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကလေးပါ ...။ ငယ်ငယ်က အင်္ဂလိပ်စာလည်း လေ့လာချင်စိတ်က ပြင်းထန်နေခဲ့တော့ မူရင်းအင်္ဂလိပ်စာအုပ်ကလေးကို ၂၀၀၆ လောက်က ဖတ်ဖြစ်ခဲ့တယ် ...။ ကိုယ်တိုင်ဘာသာပြန်ပြီး ဖတ်တယ်..။ နောက်တော့ ဘယ်တော့မှ ပြန်မဆုံတော့မယ့်သူတစ်ယောက်က ဘာသာပြန်စာအုပ်လေးကို လက်ဆောင်ပေးတယ်..။ လောလောဆယ် ဘ၀မှာ အပြောင်းအလဲတချို့နဲ့တွေ့လာရတော့ အဲဒီစာအုပ်လေးတွေကို သတိရမိလာတယ် ..။ စာအုပ်စင်တွေဆီ ပြန်ရှာတော့ မတွေ့တော့ဘူး ..။ ကျမ ဂျာမနီရောက်နေတုန်း တစ်ယောက်ယောက် ယူသွားတာဖြစ်ရမယ် ..။ ဒါပေမယ့်လည်း စာအုပ်ထဲက အကြောင်းအရာတွေက ခုထက်ထိ စိတ်ထဲမှာ စွဲစွဲမြဲမြဲမှတ်မိနေဆဲပါပဲ ...။ ရေးထားတာကလည်း ကလေးပုံပြင်လိုလို ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ ကျမတို့လို လူပြိန်းမျိုး ချက်ချင်း နားလည်လောက်အောင် ရေးထားတာကိုး ....။
မြန်မာနိုင်ငံ ပြန်ရောက်ပြီး နှစ်ပတ်လောက်အကြာမှာ အလုပ်ပြန်စလုပ်ဖြစ်တယ် ...။ ထုံးစံအတိုင်း အစဆိုတော့ နည်းနည်းအူကြောင်ကြောင်လိုလို ဖြစ်ရင်းကနေ တစ်လလောက်နေတော့ အလုပ်ထဲမှာ အသားကျလာတယ် ....။ ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲ ကျမလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်နဲ့ လုပ်ရတဲ့အလုပ်က ထပ်တူကျတယ် ...။ စာတွေ မဖတ်ချင်တော့ဘူး ဆက်မလုပ်ချင်တော့ဘူးလို့ ထင်မိပေမယ့် တကယ်တမ်းတော့ စာတွေဖတ်ရင်း လက်တွေ့အပြင်လောကမှာ လေ့လာရင်း စာတွေပြန်ရေးရင်း အဲဒီလိုဘ၀မျိုးကို ကျမက သဘောတကျရှိခဲ့တာ ...။ ပြန်ရောက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ လုပ်ဖြစ်ခဲ့တာက စာအုပ်ထဲကရေးထားတဲ့သီအိုရီတွေ ဗဟုသုတတွေထက် တကယ့်လက်တွေ့ဘ၀က လူတွေရဲ့သူတို့နေထိုင်တဲ့ဘ၀ထဲမှာ လေ့လာရင်း သူတို့ရဲ့ ရှိရင်းစွဲ ဗဟုသုတတွေ အစဉ်အလာတွေကို လေ့လာချင်ခဲ့တယ် ..လေ့လာဖြစ်ခဲ့တယ် ...။ ကျမရဲ့ Supervisor ကတော့ပြောတယ် ... တောသူတစ်ပိုင်းကိုဖြစ်လို့တဲ့ ...။ အဲဒီလိုနဲ့ ဒီအလုပ်မှာ အသားတကျရှိရင်းကနေ ကြာတော့ လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ ပျော်လာခဲ့တယ် ..။ အလုပ်လုပ်တဲ့အခါ ဆိုးတူကောင်းဖက် တိုင်ပင်လို့ရတဲ့ လက်တွဲညီတဲ့ စီနီယာအစ်မတစ်ယောက်၊ ဂျူနီယာမောင်လေးတွေလည်းရှိတယ် ။ လွဲချော်မှုတွေ တခါတရံ ရှိတတ်တဲ့အခါတိုင်း အပြစ်မမြင်တတ်တဲ့ .. ကြိုးစားမှု၊ အောင်မြင်မှုကို အသိအမှတ်ပြုပေးပြီး နေရာပေးတတ်တဲ့ Supervisor ရှိတယ် ...။ မြန်မာပြည်လုပ်ငန်းခွင်ရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း မနာလိုတာ၊ အခွင့်အရေးကို ပိုလိုချင်တတ်တဲ့သူမျိုးနဲ့လည်း ကြုံရပေမယ့် ကိုယ့်အလုပ်ကို အောင်မြင်အောင် လုပ်နေသူအတွက် အဲလိုကိစ္စကို စိတ်ထဲမထားဖြစ်ခဲ့တော့ ကြာလာတဲ့အခါ ရှိတယ်တောင် မထင်မိတော့ပါဘူး ...။
ဒီလိုနဲ့ပဲ ... တစ်ရက်မှာတော့ အခြား Project တစ်ခုကို ချက်ချင်းပြောင်းလိုက်ရတယ် ...။ လုပ်နေတဲ့ အလုပ်မှာ အသားတကျရှိနေရင်း ရှေ့ဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုတာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိလာတဲ့အချိန်မှ အသစ်တစ်ခုကို ချက်ချင်းလက်ခံလိုက်ရတယ် ...။ အသစ်ကို ပြောင်းတဲ့အခါ အကျွမ်းတ၀င်ရှိပြီးသား အဟောင်းကို လက်လွှတ်ခဲ့လိုက်ရပါတယ် ...။ ရင်းနှီးလာပြီဖြစ်တဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တွေနဲ့ဝေးရာ ကိုယ်နဲ့တရင်းတနှီးမရှိတဲ့ နေရာကို ပြောင်းချိန်မှာ အားငယ်စိတ်ကို မပေါ်လာအောင် မနည်းချိုးနှိမ်ထားခဲ့ရပါတယ် ...။ အဆင်ပြေနေတဲ့အရာတစ်ခုကို လက်လွှတ်ပြီး စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုကို လက်ခံမိခဲ့လို့ ဘယ်လိုခံစားနေရလဲလို့ လာမေးတဲ့သူတွေလည်း ရှိခဲ့တယ် ...။ တကယ်ဆိုရင် ၀မ်းနည်းသင့်တယ်မဟုတ်ပါလား ...။ ကိုယ်နဲ့ကျွမ်းဝင်ပြီးသားနေရာတစ်ခုကနေ စိန်ခေါ်မှုတွေ ပြည့်နေတဲ့နေရာတစ်ခု၊ အဆင်ပြေမပြေမသိနိုင်တဲ့ သူစိမ်းနယ်မြေတစ်ခုကို ခြေချဖို့ စိတ်အားငယ်မှု တချို့တလေတော့ ရှိသင့်တယ်မဟုတ်ပါလား ...။
တကယ်တော့ ကျမစိတ်ကို သေချာပြင်ဆင်ထားခဲ့ပါတယ် ...။ ကျမရဲ့ ဒိန်ခဲက နေရာရွေ့သွားခဲ့တာပဲ မဟုတ်ပါလား ...။ အဲဒီလိုတွေးမိတဲ့အခါ ဒိန်ခဲကို အမိအရဆုပ်ကိုင်မိဖို့ ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်တစ်ခုကလွဲရင် ၀မ်းနည်းအားငယ်မှုတွေ စိုးစဉ်းမှ မရှိခဲ့တော့တာပါပဲ ...။ အဆင်ပြေနေတဲ့နေရာလေးမှာပဲ အသားတကျရှိနေရင်းကနေ လက်ထဲရှိနေတဲ့ဒိန်ခဲကလေးပဲ စားနေမယ်ဆိုရင် ဒိန်ခဲဆိုတာက ကုန်သွားတတ်တဲ့ပစ္စည်း၊ ပုပ်သိုးသွားတတ်တဲ့ပစ္စည်းပဲလေ ...။ ကြာလာရင် ဒိန်ခဲဆိုတာ မရှိတော့မယ့် နေရာတစ်ခုကို ခုကတည်းက လက်လွှတ်ထားခဲ့ပြီး ၀င်္ကပါထဲမှာ ဒိန်ခဲအသစ်တွေရှိတဲ့နေရာကို စမ်းတ၀ါးဝါးသွားနေရင်း စိန်ခေါ်မှုတွေကို လက်ခံမိတာ တန်ပါတယ် ...။ တနေရာရာမှာ ကျမရဲ့ ဒိန်ခဲတွေအများကြီးရှိနေတယ် ...။ ကံတရားက ဒိန်ခဲတွေရှိတဲ့နေရာကို သူ့အလိုလိုသွားဖို့ စောစောစီးစီးခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အခါ .. မသွားဘဲ ရပ်တန့်နေခဲ့မယ်ဆိုရင် အခွင့်အရေးကို လက်လွှတ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ် ...။
ခုတော့ ဒိန်ခဲတချို့ကို စတွေ့လာရတယ် ...။ အရသာရှိလွန်းတဲ့ဒိန်ခဲတွေမဟုတ်သေးပေမယ့်လည်း နောက်ပိုင်းမှာ အဲဒီလို အရသာရှိတဲ့ဒိန်ခဲတွေ အများကြီးရှိနိုင်တယ်ဆိုတာကို စိတ်ကကြိုတင်ခံစားမိနေတယ် ...။ ၀င်္ကပါထဲ ပြေးလွှားနေခဲ့တာ ပင်ပန်းရကျိုးနပ်မှာပါလေ ...။ တကယ်တမ်းတော့လည်း ကျမက အရာတော်တော်များများကို အကောင်းမြင်တတ်သူတစ်ယောက်ပါ .။ အခက်အခဲတွေကြုံလာရတိုင်း ကျင့်သုံးမိတဲ့အရာက This too will pass!! ဆိုတဲ့စကားစုပါပဲ ..။ ကျန်းမာရေးကလွဲရင် အဆင်ပြေပါ့မလားလို့ ကျမစိုးထိတ်မိတဲ့အရာ မရှိသေးပါဘူး ..။ ကျန်းမာခြင်းသည် လာဘ်တစ်ပါး လို့ ပြောကြတယ်မဟုတ်လား ..။
မပြယ်တဲ့ သစ္စာ ... (၆)
Phyu Lwin January 26, 2014 1 Comments
“ချယ်ရီတွေ ပွင့်တဲ့အချိန်ကို ရောက်လာပြန်ပြီနော်” .... သူမက တစုံတစ်ခုကို သတိရမိသယောင် ပြောလာခဲ့တော့ အချိန်ကာလတွေရဲ့ မြန်မြန်ဆန်ဆန် ရွေ့လျားပုံကို သတိပြုမိလာတယ်...။ ချယ်ရီဆိုတာ ဆောင်းရာသီရဲ့ သင်္ကေတတစ်ခုဆိုတော့ ကြေကွဲစရာကောင်းလှတဲ့ အတိတ်တစ်ချိန်ကိုများ သူမက သတိရနေလေသလား ....။ မဟုတ်နိုင်ပါဘူးလေ .... အဲဒီအတိတ်ကာလက ပြီးသွားခဲ့တာ ကြာခဲ့ပြီပဲ....။ သူမက အတိတ်ကို ပြန်ပြောင်းသတိရရင်း ပစ္စုပ္ပန်မှာ ၀မ်းနည်းပူဆွေးနေမယ့်သူမျိုးမဟုတ်တဲ့ ရဲရင့်သူတစ်ယောက်သာ မဟုတ်လား ....။
“ချယ်ရီပန်းလေးတွေကို ချစ်တတ်တယ်မဟုတ်လား .. ဒီတစ်ကြိ်မ်တော့ ကိုယ်ခန့်မှန်းတာ မမှားလောက်ဘူးထင်ပါရဲ့ ..” ဆိုတော့ သူမက ခေါင်းငြိမ့်လို့ဝန်ခံတယ်...။ ဆောင်းရာသီကို ချစ်သလို ဆောင်းရာသီရဲ့ အထိမ်းအမှတ်ပန်းတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ ချယ်ရီတွေကိုလည်း ချစ်တတ်သူဖြစ်ပါသတဲ့ ..။
သူမရဲ့ Facebook cover photo မှာ ထုံးစံအတိုင်း ချယ်ရီပန်းခိုင်တွေအပြည့် အလှဆင်ထားပြန်ပါတယ် ....။ သူမက ရာသီအလိုက်ပြောင်းလဲပြီး ပွင့်လာတဲ့ပန်းအမျိုးမျိုးကို မှတ်တမ်းတင်တတ်သူ ... တခါတလေမှသာ သုံးလေ့ရှိတဲ့ သူမရဲ့ Facebook မှာ ရံဖန်ရံခါ တင်တတ်သူ ..။ တခါတရံမှသာ သူမစိတ်ထဲက ခံစားမှုတချို့တလေကို ဝေမျှတတ်သူသာ ....။ သူကတော့ လွမ်းတဲ့စိတ်က ပြင်းပြလာတဲ့အချိန်တိုင်း ရှားရှားပါးပါးပြောင်းထားတဲ့ သူမရဲ့ profile pic ကို သွားဖွင့်ကြည့်လို့ အလွမ်းတွေကို တိုင်တည်တတ်သူ ...။
တကယ်တမ်းတော့ ၄ နှစ်ဆိုတဲ့ အချိန်ကာလက လူတစ်ယောက်ရဲ့ ခံစားချက်ကို ပြောင်းလဲစေတတ်သတဲ့လား ..။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၄ နှစ်ဆိုတဲ့အချိန်ကာလတစ်လျှောက်လုံး .... သူမရဲ့သတင်းတစ်ခုတလေမှ မကြားခဲ့ရချိန်မှာ ဘာကြောင့်များ သူမရဲ့ အပြောင်းအလဲတချို့ကို နားမစွင့်ဘဲ နေခဲ့မိပါလိမ့် ..။ တကယ်ဆို ပြန်တွေ့ချိန်မှာ .... ဘေးနားက ဘ၀အဖော်နဲ့ ပျော်ရွှင်နေမယ့် ဘ၀တစ်ခုထဲက သူမကို မြင်တွေ့နိုင်တဲ့ မုဒိတာစိတ်ကို မမွေးနိုင်ခဲ့သူမျိုးများ ဖြစ်ခဲ့လေသလား ....။ သေချာပါတယ် .... အဲဒီလိုလူမျိုးတော့ လုံးဝမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး ...။ ဘေးနားမှာ သူမကို သိပ်ချစ်တတ်တဲ့ချစ်သူတစ်ယောက်နဲ့ သူမဘ၀က အရာရာပြီးပြည့်စုံနေပြီဆိုတဲ့ အတွေးကြောင့်သာ စိတ်ချနေသူတစ်ယောက်မျှသာပါ...။ အချစ်ဆိုတာ ပိုင်ဆိုင်ရမှဆိုတဲ့ အဆုံးသတ်ထက် သူမပျော်ရွှင်နေတာကိုသာ လိုလားမိသူတစ်ယောက် မဟုတ်ပါလား ....။
သူမဘ၀ရဲ့ အပြောင်းအလဲ ...။ ပြီးတော့ ရပ်တန့်မနေတတ်တဲ့ အပြောင်းအလဲရဲ့ သဘောသဘာဝအတိုင်း သူ့ဘ၀ရဲ့ အပြောင်းအလဲအချို့ ..။ လောကကြီးမှာ မပြောင်းလဲတတ်ဘဲ ရှိနေတာဆိုလို့ ပြောင်းလဲခြင်းဆိုတဲ့အရာသာ ရှိပါသတဲ့ ...။ အရာရာက အချိန်ကာလရဲ့ စေစားရာအတိုင်း အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲရင်း ... အချို့အပြောင်းအလဲတွေက ..... သဘာဝအတိုင်း ပြောင်းချိန်တန်လို့ ပြောင်းသွားတာမျိုးဖြစ်ပေမယ့် ... အချို့အပြောင်းအလဲတွေကတော့ လူတွေရဲ့ စိတ်ခံစားချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း ပြောင်းလဲသွားတာမျိုးတွေလည်း ကြုံတွေ့ဖူးကြပါရဲ့ ...။
ခေတ်ကာလရဲ့ အပြောင်းအလဲမှာ လိုက်ပါစီးမျောရင်း လူမှုရေးကွန်ယက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Facebook ဆိုတဲ့ နေရာတစ်ခုမှာ သူမများရှိနေလေမလား လိုက်လံရှာဖွေမိရာက ပန်းတွေကြားက သူမပုံကို မြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်...။ အဲဒီအချိန်ကာလက ဆောင်းရာသီနှောင်းပိုင်းဖြစ်သလို ချယ်ရီတွေပွင့်တဲ့အချိန် .. ချယ်ရီပင်တွေရှိတဲ့နေရာမှာ ရောက်နေတဲ့သူမက ချယ်ရီပန်းတွေကြား ... အပြုံးတွေနဲ့ အရင်လို လှပသွက်လက်နေဆဲ ...။ ဒါဆိုရင် ပြန်တွေ့ခဲ့ကြတာ တစ်နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီပဲ ....။ အချိန်ကာလတွေ ပြောင်းလာတာနဲ့မျှ ရာသီအလိုက် ပန်းပွင့်လေးတွေလည်း အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲခဲ့သလို ... သံယောဇဉ်တွေလည်း အရောင်ပြောင်းလာပါတယ် ...။ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ပီပြင်လာတာနဲ့အမျှ စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေက ပိုလှပလာတယ် ...။ တစ်ခုပါပဲ ..... အန္တရာယ်ကို တွေးကြောက်မနေဘဲ ... ကိုယ်ရည်ရွယ်ရာကို ဦးတည်ရင်း ရဲရဲဝင့်ဝင့် လှမ်းဝံ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့သာ လိုတာပါ ...။
♥♥ Lovely ORCHIDS ♥♥
Phyu Lwin January 23, 20142Comments
သွားရင်းလာရင်းနဲ့ ၀ါသနာအတိုင်း ဓါတ်ပုံတွေ ရိုက်ဖြစ်ခဲ့တယ်...။ ထုံးစံအတိုင်း ပန်းပင်တွေ၊ သစ်ပင်တွေပဲပေါ့..။ ပြင်ဦးလွင်ကိုရောက်ခိုက် အလုပ်အတွက် အစည်းအဝေးလုပ်တဲ့နေရာက ကံကောင်းစွာပဲ အမျိုးသားကန်တော်ကြီးဥယျာဉ်ထဲမှာ ဖြစ်နေတဲ့အခါ သဘာဝကို ပြုပြင်ထားတဲ့ အလှအပတွေကို ခံစားမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ် .....။ အစည်းအဝေးလုပ်တဲ့နေ့မှာတော့ သေသေချာချာ မလည်ဖြစ်ပေမယ့် သစ်ခွတွေကို သေချာမြင်ချင်တွေ့ချင်စိတ်နဲ့ နောက်တစ်ရက်မှာ ထပ်လည်ဖြစ်ပါတယ်.။ ဓါတ်ပုံတွေ အများကြီး ရိုက်ဖြစ်ခဲ့တယ် ...။ နောက်တော့ စာတွေ သေချာမရေးဖြစ်သေးတဲ့အချိန်မှာ Blog ပေါ်မှာ ဝေမျှဖြစ်ပြန်ပါတယ်..။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ပန်းတွေနဲ့ အလှဆင်ထားတဲ့နေရာရောက်နေတော့လည်း ပျော်စရာတော့ ကောင်းလွန်း ပါတယ် ..။
ပုံတွေကတော့ အများကြီးပါပဲ ..။ အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်ကြောင့် ခုတော့ ဒီလောက်ပဲ တင်ပါဦးမယ် ..။
ဥယျာဉ်ထဲမှာတော့ ချယ်ရီတွေ ပွင့်နေပြီ ..။ အားတဲ့အချိန်တော့ ချယ်ရီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်လောက် ရေးနိုင်ဖို့ ကြိုးစားပါဦးမယ် .....။
♥ ♥ ပန်းတွေနဲ့ဝေ ♥ ♥
Phyu Lwin January 13, 2014 1 Comments
အခုလောလောဆယ် ...ရောက်နေဖြစ်တဲ့ မြို့ကလေးမှာ ... ဟိုးအရင်ကတော့ ပန်းမျိုးစုံခဲ့မယ်ထင်ရဲ့ ...။ အခုတော့လည်း သေသေချာချာ သတ်သတ်မှတ်မှတ်ထိန်းသိမ်းထားတဲ့နေရာ ... စနစ်တကျစိုက်ပျိုးထားတဲ့ နေအိမ်တွေရယ်ကလွဲရင် လမ်းဘေးမှာတော့ ပန်းပင်တွေ ပိုနည်းပါးသွားသလိုပါပဲ ....။ ဒါပေမယ့်လည်း မြန်မာနိုင်ငံတွင်းက အခြားမြို့တွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင်တော့ သူ့ဆီကို ခြေချလိုက်တာနဲ့ ပန်းရောင်စုံတွေတော့ တွေ့နေရဆဲပါပဲ ...။
လှပနေဆဲမြို့လေးမှာ .... စက်ဘီးလေးတွေကြိုကြားကြိုကြားတွေ့နေရဆဲပေမယ့် ..... ဆိုင်ကယ်သံတ၀ီဝီကတော့ အဆက်မပြတ်ကြားနေရပြန်တယ် .....။ ရထားလုံးလို့ခေါ်တဲ့မြင်းလှည်းတွေ ရှိနေသေးတာတော့ EC တစ်ယောက်အနေနဲ့ အလွန်စိတ်ကြည်နူးရပါတယ် .....။
ဇာတိမြို့လည်းမဟုတ် .. posting ကျတဲ့နေရာလည်း မဟုတ်ပေမယ့် ... အလုပ်ကိစ္စတစ်ခုကြောင့် ဒီမြို့လေးကို လတိုင်းလိုလိုလာဖြစ်နေတယ်....။ မြွေလိမ်မြွေကောက်လမ်းတွေကို ဖြတ်ကျော်လာပြီးတိုင်း ဒီနေရာလေးကိုရောက်လာရင် စိတ်အေးချမ်းသွားရပြန်တယ် ....။ ဒါပေမယ့် ရှုပ်ပွနေတဲ့အလုပ်တွေကြား ပန်းဥယျာဉ်ထဲရောက်တာတောင် သဘာဝအလှအပကို ခံစားဖို့အချိန်ကလည်း မရှိပြန်ပါဘူး ....။
အင်တာနက်လိုင်းကလည်းမကောင်း၊ ရေးဖို့အချိန်လည်းမရှိ၊ ရေးစရာအိုင်ဒီယာလည်းမရှိချိန်မှာ ...ဒီဘလော့လေးလည်း ခြောက်သွေ့နေတာကြာခဲ့ပေါ့.....။ နှစ်သက်လွန်းလှတဲ့ ဆရာမ ဂျူး ရဲ့ စာအုပ်အသစ်ထွက်တာတောင် ခုထိ ဖတ်ချိန်မရှိတာတော့ ... တဆိတ် လွန်လွန်းလှပါတယ်...။ တခါတလေ ဖေ့ဘုတ်ကြည့်မိတဲ့အခါ ... အဲဒီစာအုပ်အကြောင်း ပြောနေကြတာမျိုးကို မဖတ်ချင်လှဘူး ..။ ဘာကြောင့်ဆို သူမဘာရေးထားတယ်ဆိုတာကို ကြိုမသိထားဘဲ အဲဒီစာအုပ်ကို တစိမ့်စိမ့်ဖတ်ချင်မိတာပါ ..။ မမျှော်လင့်ဘဲ ဖေ့ဘုတ်မှာ ဖတ်လိုက်မိတာကတော့ အဲဒီစာအုပ်ထဲမှာ Lavender ပန်းခရမ်းရောင်လေးတွေ ပါတယ်ဆိုပဲ ..။ အဆုံးသတ်ကတော့ ဇာတ်မပေါင်းသွားပါဘူးတဲ့ ...။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် သဘာဝကိုချစ်တတ်သူ ၊ ပန်းတွေကို ချစ်တတ်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ကတော့ အဲဒီပန်းလေးတွေအကြောင်းပါတယ်ဆိုတာနဲ့တင် စိတ်ထဲမှာ အရမ်းဖတ်ချင်နေမိပြီ .....။
ဒီမြို့လေးမှာ ချယ်ရီတွေတော့ စပွင့်နေပေမယ့် ကြိုကြားကြိုကြားပါပဲ ..။ အခုတစ်ခေါက်ပြန်သွားပြီးလို့ နောက်လမှာ တစ်ခေါက်ထပ်လာဖြစ်ရင် ချယ်ရီတွေကြားက မြို့လေးကို တွေ့ရမယ်ထင်ပါတယ် ....။
အခုတော့ ဒီမြို့လေးမှာ အင်တာနက်လိုင်းယက်ကန်ယက်ကန်နဲ့ပဲ .. သံယောဇဉ်မပြတ်နိုင်တဲ့ ဒီဘလော့လေးမှာ .. ည ၁၂ နာရီလောက် တချောက်ချောက်နဲ့ ရေးချင်ရာရေးနေလေရဲ့ ..........။